Shandong Gaomi Ruigu basa kudzivirira Appliance fekitari munhu rinozivikanwa zvebhizimisi kushandisa pakuburitswa uye kutengeswa basa kudzivirirwa shangu uye magiravhusi, kuti fekitari agara vakatevera basa pfungwa yepamusoro yakavakirwa uye kuchengeteka utsanzi. Rave kukura uye kukura kunotyisa kumusika makwikwi, uye rakawana mashoko akanaka uye nokurumbidzwa vatengesi zhinji uye vatengi.
fekitari yedu kazhinji zvibereko Ruigu muchiso basa kudzivirira mudziyo. The zvigadzirwa makazadziswa, uye zvikuru zvigadzirwa vari pamusoro shinda, jekiseni, kutonhora namuka series, nhamba inodarika 60 mhando, yokuisvonaka, mukuru unongotaura. Zvibereko fekitari yedu, zvichienderana bhizimisi uye mhando basa, shandisa zvakasiyana zvinhu uye pezvakaitwa kuti zvinodiwa ose akaipa kushanda ezvinhu.
Chen Jianhua, maneja mukuru, anogamuchira zvitsva nezvitsaru vatengi kuti mharidzo kubudiswa uye vakawanda customization siyana-siyana, Tiri kuda kushanda yepamusoro nezvinobvamo uye yemhando yepamusoro basa, achida kushanda siyana muupenyu kuumba itsva uye yepamusoro uye njodzi ezvinhu.